Vaovao mozika miavaka amin'ny volana Jona | Bezzia
Vaovao mozika miavaka amin'ny volana Jona
Maria vazquez | 03/06/2021 12:00 | Nohavaozina amin'ny 31/05/2021 19:49 | ankehitriny
Ny indostrian'ny fandraisam-peo dia tsy maka vakansy amin'ny volana Jona toy ny maro amintsika. Betsaka ny zava-baovao eto amin'ny mozika no havoaka mandritra ity volana ity, izay ahitantsika ny tenanay mifidy izay ho antsika no manasongadina. Enina tanteraka kapila misy karazany hafa, ka na mankaleo anao.
4 Hentitra avy amin'ny fo - Joana Serrat
5 Tsy misy andriamanitra tsy misy tompo - Fako
Ilay mpihira sy mpilalao sarimihetsika Najwa Nimri dia manohana kilasy folo nalaina avy tao repertoire sentimental an'i Amerika Latina ao amin'ny rakikirany manaraka, Ama, izay anaovany ny fiaraha-miasa manokana an'i Israel Fernández, Rusowsky, Pablo Alborán ary Álvaro Morte.
Novokarina niaraka tamin'i Josh Tampico, Ama «is a tetikasa teraka mivantana avy tany am-ponja«Hoy i Najwa Nimri. "Ny fanagadrana sy ny fandavana ny fiainana ara-javakanto dia nanery ahy hisaintsaina sy hiherika." Nandritra io fijanonana noterena io dia nifoha maraina ilay mpihira ary nisy hira iray tao an-dohany: «Doll Doll». Hira iray izay nihiran'ny reniny azy ho toy ny hira fampilendalenda ary nafenina tao an-joron'ny fitadidiany. Feonkira hafa hadino avy amin'ny fahazazana. Tsikelikely dia hitany ny kofehy mampitambatra ireto lohateny ireto: ny an'ny karazany iray, ny bolero amerikana latina.
Toy izao ny fipoiran'i Ama, rakikira iray izay hivoaka rahampitso ary androany azonao jerena a mitsikilo voalohany amin'i Filmin. Androany, ny sehatra Espaniola dia premieres Muñequita linda irery ihany, miaraka amin'i Ester Exposito no mahery fo. Horonantsary notarihin'i Bàrbara Farré ary novokarin'i CANADA.
Changephobia no LP soloina faharoa an'ny mpamoron-kira, mpamokatra ary mpandresy Grammy Rostam Batmanglij. Fanangonana lohahevitra 11 manokana manokana, saingy manerantany izy ireo ho an'izay rehetra efa niaina fisalasalana tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainany.
Voalaza ho "iray amin'ireo lehibe indrindra mpamokatra pop sy indie-rock lehibe tamin'ny taranany ”Rostam dia manana hatramin'ny efatra amin'ireo hira ao amin'ilay rakikira izay azonao henoina rahampitso: Ireto ankizy fantatray ireto, Mamoha anao, 4Runner ary Avy ao ambadiky ny cab.
Hardware no rakikira solo fahatelo nataon'i Billy Gibbons, tompon'andraikitra amin'ny ZZ Top. Voarakitra ao amin'ny Escape Studio ary novokarin'i Gibbons niaraka tamin'i Matt Sorum sy Mike Fiorentino, hira 12 no noforonina ary noforonin'ny trio izy ireo, ankoatra ny "Hey Baby, Que Paso", noraketin'ny Texas Tornados voalohany.
Ireo singa an'ny vatolampy mafy, vatolampy onja vaovao sy manga dia manasarotra ny fanoratana an'ity asa vaovao nataon'i Gibbons ity. Ny sangan'asa iray izay ny làlany farany, Desert high, dia tsy inona fa ny sombin-teny tononina miaraka amina gitara mahery vaika izay mampihetsi-po ny angano Graham Parsons, izay ny fahafatesany 48 taona lasa izay dia nitranga tany akaikin'ny toerana nanoratana ny Hardware.
Hentitra avy amin'ny fo - Joana Serrat
Hentitra avy amin'ny fo, hivoaka manaraka ny rakikira fahadimy an'i Joana Serrat 11 Jona eo ambanin'ny marika Loose, nahazo alalana manokana amin'ny Great Canyon Records. Voarakitra ao amin'ny Redwood Studio any Denton, Texas, izay niarahany niasa tamin'ny injeniera sy mpamokatra Ted Young, misy làlana 10 izy io.
Tao anatin'izay volana lasa izay dia namoaka i Joana Serrat ho topi-maso "Sary", "Miaraka amiko na aiza na aiza alehako" ary ny "Demons" farany indrindra. Ilay magazay anglisy malaza Uncut dia nanome naoty ny rakikira 9 amin'ny 10, ao anatin'izany ny faritra "Revelations". Te handre izany ve ianao?
Tsy misy andriamanitra tsy misy tompo - Fako
Amin'ny 11 Jona dia mbola hahita ny mazava ihany koa ny zava-baovao vao hainay mozika: Tsy misy andriamanitra tsy misy tompo, ny Rakitra fahafito an'ny tarika fako. Novokarin'i Garbage sy Billy Bush, ny taolam-baton'ity rakitsary ity dia noforonina tamin'ny fahavaratry ny taona 2018 tany an-tany efitra Palm Springs, toerana nandalovan'ilay quartet tapa-bolana tamin'ny fanatsarana, fanandramana ary fahatsapana ireo hira.
Shirley Manson: “Ity no rakitsoratra fahafito ananantsika, izay misy isa lehibe eo amin'ny ADN ny atiny. Ny toetra tsara fito, ny fanaintainana fito ary ny ota mahafaty fito. Io no fomba fiezahantsika hahatakatra ny hadalan'izao tontolo izao sy ny korontana mahatalanjona nisy anay. "
El Rakitra fahafito an'i Maroon 5 havoaka amin'ny 11 Jona, Jordi. Anaram-boninahitra nanoloran'ny tarika amerikana tarihin'i Adam Levine fanomezam-boninahitra ny mpitantana azy taloha, Jordan Feldstein, izay maty tamin'ny faran'ny taona 2017 noho ny embolismeran'ny havokavoka.
Novokarin'i J Kash, ilay rakikira hanana hira 14 Izay efa henontsika ny Fahatsiarovana, ny fitiavan'ny olona ary ny lesoka kanto niaraka tamin'i Megan Thee Stallion. Na izany aza, tsy io irery no hiara-miasa amin'ilay rakikira. Ny artista toa Anuel AA, Tainy, Stevie Nicks, Juice WRLD ary Jason Derulo dia ho eo amin'ny sanganasa fahafito an'ny mpitendry mozika ihany koa.
Miandry ny famoahana ireo rakikira ireo ve ianao? Iza amin'ireo vaovao mozika ireo no tianao ho re?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » ankehitriny » Vaovao mozika miavaka amin'ny volana Jona